'रेल्वे ठेक्काको भ्रष्टाचारी र प्रचण्डका घरबेटीलाई कारबाही गर्छौं'- बिप्लव > फिसटेल न्यूज
‘रेल्वे ठेक्काको भ्रष्टाचारी र प्रचण्डका घरबेटीलाई कारबाही गर्छौं’- बिप्लव
२१ भदौ, काठमाडौं । लामो समय सुसुप्त देखिएको भूमिगत विद्रोही विप्लव समूह फेरि सल्बलाएको छ । सो समूहमा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा(प्रकाण्ड) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केही ठेकदार र सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल्वे ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै रेल विभागका हाकिम र ठेकदारहरुका साथै मलको ठेक्का लिएर किसानलाई उपलब्ध नगराउने ठेकदार (प्रचण्डका घरबेटी) समेत लाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्न प्रकाण्डले माग गरेका छन् । सरकारले उनीहरुमाथि कारवाही नगरे आफ्नो पार्टीले कारबाही गर्नेे प्रकाण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बोल कबोल अनुसार सम्बन्धित ठेकदारले मल आपूर्ति नगर्दा, लाखौंलाख किसानको धान बाली बिग्रिँदा र देशको उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी हुँदासमेत सरकार र कृषि मन्त्रालयले ठेकदारलाई कारबाहीको त के कुरा, सोधपुछसमेत नगरेको प्रकाण्डको आरोप छ ।
बाढी पीडितको धानखेतमा गृहमन्त्रिको दाँई |
अगस्ट २३ अछाम:- गत मङ्गलबार अछामको कैलाश खोलामा आएको बाढीले रामरोशन गाउँपालिका ५ मा मने साउदको करिब १५ रोपनी जग्गामा लगाएको धानबाली नष्ट गर्‍यो ।बाढीबाट केही क्षेत्रको धान भने बचेको थियो । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को जम्बो टोलीले जोगिएको धानखेतको केही क्षेत्र सखाप पारेको छ ।गृहमन्त्री बादल शुक्रबार दलबल लिएर घटनास्थलको निरीक्षण र राहतका लागि […]
अबको २० दिनपछि विदा हुँदै कुलमान
८ भदौ, काठमाडौं । कार्यकाल थपिएन भने अबको २० दिनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ बिदा हुनेछन् ।घिसिङको विदा हुने दिन नजिकिएसँगै उनी प्राधिकरणमा दोहोरिनुपर्छ र दोहोरिनु हुँदैन भन्नेखालका दुईथरी तर्कहरु सुनिँदैछन् ।प्राधिकरणमा ४ वर्षे नेतृत्व सम्हाल्दा चर्चामा आएका घिसिङको विदाई पछि विद्युत प्राधिकरणको भविष्य के हुने भन्ने चासो आम रुपमा बढ्न थालेको छ । […]
त्यो ‘फेक अकाउन्ट’ जसले कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिबारे ल्यायो यस्तो तरंग
१० भदौ, काठमाडौँ । मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एकाएक बधाइ र शुभकामना सन्देशको ओईरो लाग्यो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकाल सकिने समय नजिकिदै गर्दा दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारले उनलाई पुन: नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरु र सामाजिक सञ्जालहरु रंगिए । यद्यपी सो बारे कुनै निर्णय नभएको र […]
रेलमार्गको ठेक्कामा खुलेआम भ्रष्टाचार हुँदैछ-राजेन्द्र लिङ्देन
१० भदौ, काठमाडौं । सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनससरीको इनरुवासम्म रेलमार्गको ट्रयाक बेड बनाउन ठेक्का लगाउँदैछ । आवश्यक पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउन लागिएको भन्दै विज्ञहरुले ठेक्का प्रक्रिया रोकेर समग्र यातातात योजनाको समीक्षा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विज्ञहरुले वीरगञ्ज काठमाडौं रेलमार्ग बढी प्रभावकारी हुने भन्दै झापातर्फ नलाग्न सरकारलाई भनेका छन् । रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा […]
१४ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गर्न सभामुख सापकोटा शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा बाढी पहिरोबाट विस्थापित सिन्धुपाल्चोकवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी आवास बनाएर स्थानान्तरण गर्नेबारे छलफल भएको सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ । सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेका […]
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने सरकारको तयारी
१४ भदौ, काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव तयार भएको छ। उर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई नै आगामी चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता दिने तयारी गरेको हो। घिसिङको कार्यअवधि आगामी २९ भदौमा सकिदैछ। तर, फेरि पनि उनलाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको हो। उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङलाई […]
बामदेव गौतम उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्दै !
१६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतम उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीको नेतृत्व गर्नेगरी राष्ट्रियसभामा जाने तयारी भइरहेको खुलासा गरेका छन् । उपाध्यक्ष गौतमबारे आगामी भदौ १८ गते बस्ने सचिवालय बैठकले ठोस निर्णय गर्ने बताए । उनले सचिवालय बैठकले कार्यदलको सुझाव कार्यन्वयनका लागि छलफल गरेर निर्णय गर्ने भन्दै गौतम उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीको नेतृत्व […]
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा राजीनामा
१९ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदबाट राजिनामा गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजिनामा बुझाएका हुन् । त्यसअगाडि उनी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बिदाई कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चूनौतीपूर्ण अवस्थामा आफुले जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै जग बसाल्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । […]
निर्वाचन आचारसंहिता आजैदेखि लागू हुने।